Uhambo - I-Geofumed
Iifoto kunye namabali okuhamba.
Ndandisoloko ndibuza ukuba ndiyakwenza ntoni ukuba ndifanele ndihambe kuhlala edolophini encinane, apho ukufikelela kwisiqhagamshelo esiyithandayo kulo mzi kunqunyiwe. Okwangoku ngoku ukuba izinto ezithandwayo zokusebenzisana ezaza ngeInternet zisenza sazi kakhulu imilayezo entsha yeposi, iindaba kwiintanethi zentlalo ...
Yintoni eyenzekayo kwiminyaka ye-40?
Ngexesha elidlulileyo ndabhala inqaku malunga nenkululeko yenkululeko, kwenye yezinye iinyanga ezinzima. Inqaku endiyithanda kakhulu ukufunda kwakhona, kuba mhlawumbi ngenye yazo apho ubukhulu bomzuzu bukhutshwa khona. Isithunzi esabekwa sasifana nale, nangona umzuzu wawungafani. Kodwa ngokubanzi, ...
Uhambo lwam lokugqibela kwiifoto ze-7
Akukho nantoni na izitalato ezicacileyo kwiiveki ezimbini ezedlulileyo. Kodwa nangona ukuzama ukuba wenziwe ukuba akuyi kuphelela eliweni, uthathe imoto leyo eza contravía okanye Zibone semoviente isiqingatha indlela ... ukuya kule ndawo, ahlale iveranda kwaye uzive uxolo ezithwala ilanga ...
Umongo wesiDashi, ukubonakaliswa kweLatin America
Netherlands uhlala benchmark iziganeko ezahlukeneyo kwicandelo lobugcisa, kodwa ngaphambi kokuba bangene mna kwezinye izinto apho kuyo itches ukubhala, efana ngexesha lokugqibela ezimbalwa ndingongaphezulu ngokuhamba yam ethile iprozi bazi silindele ukuba nam iiyure elide indiza ebuyela, ixabisa ngaphezulu ...
Geofumed ... ngokoqobo kwi-fly
miles 627 nganye ngeyure iinyawo Ukuphakama 38,0e00 ngaphezu komphakamo wolwandle Umgama ukuya kwindawo iikhilomitha 1,251 phandle Ubushushu:: isantya High emhlabeni izidanga -74 Fahrenheit Ixesha ukuba Destination: 2: 25 iiyure ixesha sendawo Imvelaphi: 3: 00 AM Uqikelelo ixesha ukufika 11: 27 19 AM Kukho amaxesha bagxotha, ukuba nam ...
Imiba encinane kakhulu technical Congress Agrimensura
Molo ithenda, iye ibe nemveliso ngokwenene, lebyi Guatemala Congress kunye lixesha ebalulekileyo Central America. Ngaphambi kokuba uthethe kwiinkalo zobugcisa isiganeko leyo unomdla kuphela abafundi am, naye uya kuba mnandi ngosuku olulandelayo, ndithabatha ukukhulula ezinye imeko ukuba babe basting free ...
Akukho nto efana nokuphumla ixesha elithile kunye ne-geofumaditos ngaphaya kwalo. Emva kwenyanga yokulwa nesitofu segesi se-methane, emva kokuvavanya sasiya kubhiyozela ukutyelelwa kwendoda ewayo esuka eHouston. Isishwankathelo ndishiya ezinye iifoto. Emva kwam uluvo lwam wokugqibela, bawuthabathe indawo yokuqala kwindawo yamacandelo amahlanu ...
Le projekthi yokusebenzisana yokudala nokuhlaziywa kweemephu zeendlela ze-GPS. Wazalelwa eVenezuela kodwa kuncinci kuye kwandiselwa kwamanye amazwe asePanishi ngexesha apho izicelo eziphathekayo zithandwa kwaye ukufikelela kwi-Intanethi kufinyeleleka. Ndiyithanda elinye lamabali ...
GPS / Izixhobo, ezintsha, Uhambo
Kubonakala ngathi ekugqibeleni ndifumene isicelo esifanelekileyo sePad esivumela ukuba ubhale kwiblogi ngaphandle kokubandezeleka okukhulu. Kuze kube ngoku ndizama iBlogPress kunye ne-WordPress esemthethweni, kodwa ndicinga ukuba i-Blogsy yonyulwe ngokwemiqathango ye-WYSIWYG ingaphezulu okanye engathandekiyo. Ngexa ndimele ndiyicombulule inkonzo kunye nemifanekiso ebanjwe kwi ...
Apple - Mac, Internet kunye neBlogs, Uhambo
Undincede ngethuba leentsuku zokugqibela kwikhenketho yeekhilomitha ngeendawo ezichongiweyo. Isihloko esincinci ndiza kuzo kule ndawo, ndizama ukunyamekela ukungabonakali kwintsimi yam yomsebenzi kunye nokonwaba ukwabelana ngezifundo zobuchwepheshe kunye nabanye abambisene nalo luluntu. Ndikwazi ukuqinisekisa amandla kulolu hambo ...
Imibala kunye nemigca yeeholide
I-400 ayizange ibe yiminyaka yokuthula, kodwa ukuyiqonda apha ndiyishiya imibala yeholide kunye namakhwenkwe nentombazana ekhanyisa amehlo am. Ukukhenketho lwasekhaya kuyaphuma ngokwezoqoqosho kwaye kwakha iingcambu kubantwana. Isityezelo sezolimo kumafama kumasipala waseTaulabé. Loo nto ubonakala ...
I-MapEnvelope ngumsi othakazelisayo nomlula wenkwenkwe enomdla omkhulu wokwakha. Ukuba ufune ukumangaliswa ngokuthi ufuna ukuphi na uhlobo oluthile, i-MapEnvelope, njengoko itsho igama layo, ivelisa imvulophu ephethe imephu eprintiweyo. Kufuneka kuphela ukungena kwindawo, umzekelo: london iso, london, uk ...
Google umhlaba / imephu, Uhambo
Uhambo olude. Iiyure ze-2 zisuka kwi-Central America ukuya eMiami, iiyure ze-8 ukuya eLondon, i-1 ngakumbi ukuya e-Amsterdam: yongeza uxhumano lwe-6 kwi-17. Iwashi ye-biological iyaqheleka emva kokuqhaqhaza njengebhere kwinqwelo. Kodwa isisu asikabikho; ngoko phakathi kobusuku kwafuneka ndifune ikhofi ...
egeomates My, Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa, Uhambo
Into eninzi yokwenza, ngokuqinisekileyo eninzi. Apha ndishiya intle yeentsuku zokugqibela kwimifanekiso eye yangishiya i-flavour. Ulo busuku lunenyanga nangomso nge-parachico ilanga wandibuza parachico Ndiza kukunika i-stick my mask i-chinchin iya kukugcoba nge-sarape zapateado yam idiresi Ndiya kudansa, i-Little Mermaid ...
Oko esiza kubona kwi-Inspired 2010
Kwiintsuku ezimbalwa ezedlulileyo ndamkele isimemo sokuya kwi-Inspired 2010 ukuba lo nyaka uya kubanjwa phakathi kwe-19 ne-20 ngo-Oktobha. Ngeke kubekho isiganeko kwiMerika, kuphela eYurophu, kwaye yintoni enye indawo engcono kuneHolland, elinelobuchwephesha malunga ne-European showcase ...
... uxakeke ...
Ukuhamba, ukubhala, i-geofumando ngokufunwa. Kwaye ndicwangcisa uhambo lwam oluya kwelinye icala lentshona.
Inyanga iyanzima ngexesha, kodwa eyanelisayo kwimpumelelo kunye nentsapho kunye nentsapho kunye nentombazana ekhanyisa amehlo am. Ngokukhawuleza ukuba ndikwazi ukuthumela amaxesha ambalwa, nantsi isishwankathelo esifutshane. Inkqubo yesatifikethi ngamakhono. Amava anomdla kakhulu, ukuqulunqwa kwesiqinisekiso esivumelekileyo, ibhanki yezinto, ...
Uhambo lwam luphelile, lukhathele kodwa luqhamo. Ukusebenzisana nemimandla emitsha, ixesha lokuhleka kweentlonelo kwaye nangona ucinga iingonyama ezenza imisebenzi yamatriki kunye nesiNgesi kwimigudu yabo engcono. Unolwazi oluninzi, ihotele apho ndihleli khona, ngaphandle kwebhodi lokubhukuda, i-lagoon ehambahambayo kunye namahhashi e-pony ...